Private banks remain closed despite Central Bank’s order | Myanmar Business Today
Home Business Private banks remain closed despite Central Bank’s order
BusinessInvestment & FinanceMMBIZ News
Despite orders from the Central Bank of Myanmar to reopen banks on Monday, private banks remained closed on March 8, 2021.
“Private banks will not be able to reopen because private bank employees have joined the Civil Disobedience Movement (CDM) and do not go to work. However, ATMs are frequently re-cashed to streamline cash flow,”aprivate bank employee said.
The Myanmar military stagedacoup on February 1, scheduled to start the new Hluttaw’s first session, overthrowingademocratically elected government. In response and protest to the coup, the civil servants, including private bankers, joined the civil disobedience movement (CDM) halting the military’s bureaucratic mechanism.
The Central Bank of Myanmar, whose deputy governor has been detained by the junta since February 1 and unheard of ever since issued an order on March5ordering private banks to reopen all the branches.
However, very few branches in major cities including Yangon, Naypyidaw, and Mandalay, were seen open on March 8.
Most of the private banks’ branches have been closed since February as private bank employees joined the CDM movement to suffocate the junta.
၂၀၂၁ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ ဘဏ်များအားလုံး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် သတ် မှတ်ထားသော်လည်း အပြည့်အဝ ဖွင့်လှစ်နိုင် ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
“ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေ CDM မှာပါဝင် နေတဲ့အတွက် ဘဏ်တွေဖွင့်ခိုင်းလည်း မဖွင့်နိုင် ဘူး။ ပြည်သူတွေ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အဆင် ပြေဖို့အတွက်တော့ ATM ကို ငွေဖြည့်ပေးရတာ တွေတော့ ရှိပါတယ်။ အလုပ်တော့ မဆင်းကြ ပါဘူး”ဟု ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
မတ်လ(၈)ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ဘဏ်ခွဲများကို အမြန်ဆုံးဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင် ရွက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က မတ်လ (၅) ရက်နေ့၊ ရက်စွဲနဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေထံ အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း မတ်လ ၈ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်၊ မန္တလေး အပါအဝင် မြို့ကြီးများ၌ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုမရှိသေးဘဲ ဘဏ်အနည်းငယ်သာ ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းများအရ သိရသည်။
ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ မှစတင်ကာ နိုင်ငံရေးအခြေ အနေများကြောင့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ ဆန္ဒပြမှု များတွင် ပါဝင်ခဲ့သဖြင့် ဘဏ်များကို ပိတ်ထား ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
Previous articleMAI Receives Second A320, Taking Its Fleet Size to Seven Aircraft
Next articleLocal gold price drops reflecting global gold price
Gold price in domestic price, reflecting global gold price and dollar rate, lowered afterasudden increase in price following the coup, according to...